म्युजिक कम्पनी र गायक-गायिकाबीच ट्याक विवाद बढ्दै, आयस्रोत बारे छानविन हुँदै - नेपालबहस
म्युजिक कम्पनी र गायक-गायिकाबीच ट्याक विवाद बढ्दै, आयस्रोत बारे छानविन हुँदै
| १७:२६:१० मा प्रकाशित
२५ माघ, काठमाडौं । नेपालमा गीत संगीतको व्यवसायिक विकाससँगै नेपाली गायक गायिकाहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । गीत संगीतको रचना गरेर, गाएर वा बजाएर बाँच्न सकिदैन भन्ने पुरानो मान्यता भत्किदै गएको छ ।
गीत संगीतको व्यवसायिक विस्तारका लागि खुलेका दर्जनौं म्युजिक कम्पनीहरुले दिने रोयल्टीदेखि युटुवहरुमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीले अहिले चल्तीका गायक गायिकाहरुको जीवनस्तर लोभलाग्दो देखिन थालेको छ । त्यसबाहेक पनि देशविदेशमा हरेक महिना जसो हुने महोत्सव एवं कार्यक्रमहरुबाट प्राप्त हुने मोटो आम्दानी पनि गायक गायिकाहरुको अर्को स्रोतका रुपमा रहेको पाइन्छ ।
तर राज्यका लागि नेपाली गायक गायिकाहरुको लोभलाग्दो जीवनस्तर देख्दा आम्दानीको स्रोत के हो ? भन्ने प्रश्न पछिल्लो समय उठन थालेको छ । हिजोका दिनमा चप्पल पड्काएर हिड्नेहरुको आजको लवाईखवाई र उठबस देख्दा उनीहरु कसरी रातारात करोडपति भए ? भन्ने खोजी हुन थालेको छ ।
सम्पति शुद्धिकरण विभाग स्रोतका अनुसार हिजो एउटा गीत गाउन आउँदा खाजा खाने पैसा नभएर साथीभाईको आश गर्नेहरु आज लाखौं करोडौंका गाडी चढेर हिड्न थालेका छन्, पाँचतारे होटलमा लन्च र डिनर गर्न थालेका छन् । त्यो राम्रै पक्ष भएपनि उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के हो ? यदि गीतसंगीत क्षेत्रबाटै कमाएका हुन भने त्यसको कर राज्यलाई तिरेका छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन अनुसन्धान थालिएको छ । यदि कर नतिरी कमाएको हो भने त्यो जुनसुकै क्षेत्रबाट आर्जन गरेको भएपनि अवैध हो ।
हुन पनि अधिकांश गायक-गायिकाहरु गीत गाउन आउँदा २ रुपैयाँ पनि लिएर आएका हुँदैनन् । एकजना म्युजिक कम्पनीका मालिक भन्छन्, “ उनीहरु म्युजिक कम्पनीको लगानीमा गीत गाउँछन्, तर अर्काले गरेको लगानीको ट्याक बोकेर देशविदेशका कार्यक्रममा भाग लिन्छन् ।त्यहाँबाट मोटो रकम लिन्छन् तर न त त्यसको सुको पैसा कर तिर्छन न त विदेशबाट भित्रने मोटो रकमको गेट वे नै बैध हुन्छ ? खासगरी विदेशका कार्यक्रममा भाग लिएर फर्कने कलाकारहरुले अवैध रुपमा आफ्नो पारिश्रमिक भित्र्याउने गरेका छन् । त्यो सरासर मनि लाउण्ड्रीङको विषय भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
लगानीकर्ता र गायक-गायिकाको विवाद सतहमा
यही सेरोफेरोमा पछिल्लो समय सेलिब्रेटी बनेका गायक गायिका र लगानीकर्ता म्युजिक कम्पनी बीचको विवाद सतहमा देखिन थालेको छ ।प्रतिलिपी अधिकार ऐन बमोजिम अरुको लगानीमा बनेको ट्याकको अनधिकृत प्रयोग गर्न पाईदैन् । तर अधिकांश गायक गायिकाहरुले निर्वाधरुपमा चोरीको ट्याक प्रयोग गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गीत गाउँदै हिड्ने गरेको आरोप म्युजिक कम्पनीवालाहरु लगाउँछन् । चोरी यस अर्थमा कि लगानीकर्ताको सहमति र अनुमति बिना गायक गायिकहरुले देशविदेशमा हुने थुप्रै कार्यक्रमहरुमा यस्ता ट्याकहरुको खुलेयाम प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् ।
उक्त ऐनले गायक गायिकाहरुलाई प्रस्तोताको मात्रै हैसियत दिएको छ । अझ प्रस्तोता भन्नाले गायक गायिका मात्र नभएर म्युजिक भिडियोमा खेल्ने मोडल तथा निर्देशकलाई पनि समेटेर त्यसको विविधिकरण गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा गायक गायिका मात्र कुनैपनि गीतको प्रस्तोता होइनन् । अझ गायक गायिकाहरु त ऐनले दिएको हैसियत भन्दा माथि आफूलाई स्रष्टा भन्न रुचाउने गरेका छन् । जबकी स्रष्टा भनेको त गीतकार र संगीतकार मात्र हुन् । सिर्जना उनीहरुको हो ।
विचित्रको कुरा त के छ भने छोटो समय मै सेलिब्रेटी बनेका चल्तीका गायक गायिकाहरुले बिगत लामो समयदेखि अरुको लगानीमा बनेको ट्याक निर्वाध रुपमा प्रयोग गरेर मासिक लाखौं कमाउने गरेका छन् । यसको प्रमाणस्वरुप हरेक गायक गायिकाहरुको काठमाडौंमा घर, गाडी, अमेरिका क्यानडाको पीआर तथा लिभिङ स्टाण्र्डर्ड हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । तर उच्चस्तरको जीवनशैलीका बीच उनीहरुले राज्यलाई एकसुको पनि कर भने तिर्दैनन् ।
ती लगानीकर्ता भन्छन्, प्रतिलिपी अधिकार ऐन अनुसार उनीहरुको गाउँदै हिड्ने कुरा कानुन विपरित भएको दखिन्छ । त्यस्तै आम्दानीको स्रोत पनि अवैध रहेको छ । बार्षिक आयकर नर्तिने, विदेशबाट अवैध च्यानलमार्फत पैसा ल्याउने र कारोबारको वासलात समेत पेश नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राज्यलाई सबै किसिमबाट ठग्ने अनि राज्यले हामीलाई केही गरेन भनेर बेलाबेला रुने गरेको पनि देखिन्छ । तर्सथ राज्यले उनीहरुको आयस्रोत एकिन गरी कर लगाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ भने सम्पति शुद्धिकरण विभागले गायकगायिकाहरुको सम्पति छानविन किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यस्ता विषय पछिल्लो समय संगीत क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ । गायक गायिका र लगानीकर्ता बीच द्धन्द्ध बढ्दो क्रममा देखा परेको छ । राज्यका सम्बन्धित निकायमा विधिवत दर्ता भएर, कर तिरेर, करोडौंको लगानीमा खुलेका म्युजिक कम्पनीका लगानीकर्ताहरु यतिबेला आ आफ्नो लगानीको ट्याक सुरक्षणमा लागेका छन् भने गायक गायिकाहरु हुल बाँधेर, ताकत प्रर्दशनको क्रममा सरकारी तहमा भएका व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्धलाई भजाएर अरुको लगानीमा बनेको ट्याक हडप्ने अभियानमा लागेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक म्युजिक कम्पनीका मालिकले बताए ।
राज्यले यो कुरा बेलैमा बुझेर कानुन बमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा संरक्षण गर्ने र कर नतिर्ने कलाकारहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएको उनको तर्क छ । अन्यथा स्रष्टाका रुपमा रहेका गीतकार, संगीतकार र लगानीकर्ताहरुको सबै सम्पति र प्रतिलिपि अधिकार समेत गायक गायिकाहरुले हुल बाँधेर लुटिनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।
यसै विषयमा बिन्धबासिनी म्युजिक कम्पनी र गायक प्रमोद खरेलको द्धन्द्ध सतहमा देखिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन अनुसार गायक प्रमोद खरेल र बिन्धबासिनी म्युजिक कम्पनीको कानुनी हैसियत एउटै हो । तर गायक खरेलले ५७ जना मतियारहरु खडा गरेर बिन्धबासिनी म्युजिक प्रालिबिरुद्ध भनसुनका भरमा फौजदारी कसुरको मुद्धा दर्ता गराउन सफल भएका छन् । ऐन कानुनलाई जब भीडले प्रभावित पार्छ तब न्याय लुक्दछ । पछिल्लो उदाहरण यही हो ।
आकाशको ‘ओ माई लर्ड’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) १ महिना पहिले
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ करोडको आईपीओ फागुन २३ गतेदेखि निष्कासन हुने २४ मिनेट पहिले
प्रोत्साहन अभियानले दुई वर्ष बाँझो रहेको जग्गा खेतीयोग्य बन्दै ५६ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको कम्पनी सचिबमा कार्की नियुक्त ४ दिन पहिले
ओलीको सर्वसत्तावाद, सबै रमिते १ वर्ष पहिले
पूस्तक पसलका सहयोगी सापकोटा बने मालिक २ महिना पहिले
जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द हुने १ वर्ष पहिले